Gore risina zhizha: raive riini, zvinokonzera uye mhedzisiro | Network Meteorology
Gore risina zhizha
ChiGerman Portillo | 05/05/2021 14:00 | Mamiriro ekunze
Isu tinoziva kuti mumamiriro ekunze panogona kuve nezvinoshamisa zviitiko zvinoenderana nezvimwe zvakatarwa mamiriro. Mamiriro ekunze epasi rese akadaro anogona kukanganiswa nekuputika kukuru kwegomo rinoputika. Vakakurumbira gore risina zhizha kubva muna 1816 chaive chinhu chakaringana kufungisisa kuti ndezvipi zvinhu zvepasi zvinogona kukanganisa zvakanyanya mamiriro ekunze.
Muchikamu chino tiri kuzokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve gore risina zhizha uye kuti mamwe mamiriro anokanganisa mamiriro ekunze epasi.
1 Gore risina zhizha
2 Kukanganisa kwegore pasina zhizha
Nekuda kwekuputika kweGomo Tambora, rinova gomo rinoputika riri muBagua pakati paApril 5 na10, 1816, makore makuru eguruva nemadota akaburitswa mudenga. Vanopfuura vanhu zviuru gumi nezviviri vakafa mumaawa makumi maviri nemana ekutanga, inowanzo kukonzerwa ne ashfall uye kuyerera kwepyroclastic. Mushure meizvozvo, vamwe vanhu zviuru makumi manomwe nezvishanu vakafa nenzara uye chirwere mushure meichi chikuru kuputika mumakore zviuru zviviri.
Kuve kumwe kuputika kukuru kwazvo pasi rose, ayo mamirioni ematani emadota anoputika uye matani mamirioni 55 esarufa dioxide akaburitswa kureba kwemakiromita makumi matatu nemaviri mumhepo. Kunyangwe hazvo kuputika kwakaputika, mhepo yaive nemafungu ane simba akatakura makore akadonhedza madonhwe kuenda kumadokero. Izvi zvakaita kuti zvese zvinoburitswa negomo rinopoterera pasi mumasvondo maviri chete.
Mwedzi miviri gare gare aya mafungu akasvika kuNorth Pole neSouth Pole. Iyo yakanaka kwazvo sarufa yezvimedu yakamiswa mumhepo kwemakore. Muzhizha regore mushure mekuputika, chifukidzo chisingaoneki chedota chakagadzirwa chakafukidza nyika yese. Rutivi rwunopenya rwunoratidzira kupenya kwezuva uye haruna kubvumira mwaranzi kusvika pamusoro, ichideredza tembiricha yepasi rose. Uye zvakare, zvakakonzera mamiriro ekunze kutenderera pasirese. Ichi ndicho chikonzero gore risina zhizha rakaitika mugore ra1816.
Haisi chero mhando yekutsiva kwaMwari sekufungidzirwa panguva iyoyo, asi kuputika kwakanyanya kwazvo kwegomo. Izvi zvinoita kuti mamiriro ekunze atonhorere nemadhigirii akati wandei kwemakore.
Kukanganisa kwegore pasina zhizha
Iko kuzere kukanganisa kwekutonhora kwepasi rese kwakatorwa kubva kuTambora cataclysm uye haina kutanga kucherechedzwa kusvika gore rakatevera. Makore ekuparadzira madonhwe mu stratosphere akaderedza huwandu hwesimba rezuva rinosvika pasi. Mhepo, ivhu, uyezve makungwa akadzikisa tembiricha yavo. Izvi zvinogona kunyatso kufundwa nemhete dzekukura dzemiouki dzeEurope. Iyi studio inotiudza kuti gore ra1816 rakanga riri gore rechipiri rinotonhora zvikuru muNorth Hemisphere kubvira mugore ra1400.
Sezvo zhizha uye kudonha zvichitenderera, iro gore rakaburitsa dzinoyevedza dzvuku, pepuru uye orenji kunyura kwezuva pamusoro peLondon. Zvinogona kutaurwa kuti kudenga kwaive nemoto mune dzimwe nzvimbo. Muchirimo cha1816 kucharamba kune chando kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUnited States neCanada. Icho kutonhora kwakasvikawo kuTennessee uye iyo inotonhora mamiriro ekunze yakagara kusvika Chikumi. Aya akange ari iwo tembiricha yakaderera zvekuti mune dzimwe nzvimbo seNew Hampshire zvaive zvisingaite kurima ivhu.
Mumwedzi uno kwaive nemhepo inotonhorera uye dutu rinotyisa rakawira mune akawanda Shiri dzaive dzakagwamba nechando kufa mumigwagwa kwasara mavhiki maviri kuti zhizha risati rasvika. Zvirimwa zvakawanda zvakazopedzisira zvaoma muminda nekuda kwechando chakanyanya. Mapoka mazhinji amakwai akapararawo nechando. Ino inguva iyo yakakomba meteorological sainzi yakanga isati yavepo uye pakange pasina mamiriro ekunze emhando ipi neipi.
Mukusavapo kwesainzi, vanamati vakaita madutu ese akakonzerwa naMwari akaita chiratidzo chehasha dzamwari. Europe yakawanawo tembiricha yakadzika kwazvo uye chitubu chinotonhora uye chinyoro pane zvakajairwa. Nekuda kwemutengo wakakwira webaron, pakanga paine mhirizhonga dzakasiyana muFrance.
Kune ongororo dzakawanda pagore risina zhizha uye dzinonyanya kutariswa nekuongororwa kwezvindori zvemiouki dzeEuropean. Mhete idzi dzinoratidza kuti gore rino 1816 ndiro raitonhora kupfuura mamwe kubvira muna 1400. Makakatanwa pavagari akawedzera. Kutonhora kwakanyanya uye kusanaya kwemvura kwakabvisa huswa uye zvirimwa zvechibage munzvimbo zhinji, pamwe nemhepo yakaitika muna Gumiguru muna Nyamavhuvhu. Munzvimbo yeEurope kwaigara kuchinaya uye chando chakakura, kunyanya munzvimbo dzemakomo dze switzerland. Izvi zvakakonzera nzizi nehova kufashukira.
Dzimba dzevarimi dzakatanga kushanda nekuchimbidza kuchengetedza miriwo uye huswa hwese hwakatakurwa hwakanyoroveswa muzvikepe. Yaive ndiyo chete nzira yekuchengetedza zvirimwa zvakanyanya sezvinobvira. MuGerman matapiri akapedzisira aora pasuwo repasi pemadutu akaparadza zvirimwa zvizhinji. Kukohwiwa kwezviyo kwakabatanawo, mazambiringa haana kuibva muminda yemizambiringa uye ndakavaona angangoita mazuva ese kwemavhiki mashanu akateedzana.
MuParis maive nevamwe vakuru vechechi vakaraira minamato yakakosha kwemazuva gumi nemapfumbamwe kuyedza kukumbira Mwari kuti apedze kushata uku. Vatengesi muEurope vakakwidza mitengo, nepo kushungurudzika kwevarombo kwakasvika pamatanho anotyisa, vese vachitarisira kukohwa kwakashata. Zvese muSpain nemuPortugal iyo inotonhora yakaramba ichitonhora mavhareji anenge 2-3 degrees pazasi peyakajairwa.
Kunyanya kuwanda kwemvura yakanga iri mumwedzi waNyamavhuvhu, vari varume vanowanzooma. Icho kutonhora uye hunyoro zvakaguma zvichikuvadza zvirimwa munyika yese. Mucherechedzi wedenga akaona kuti mumwedzi wese waChikunguru kwaingova nemazuva matatu asina makore. Iyo tembiricha inotonhora yakapedzisira yauraya michero, kunyanya mazambiringa, nekuti ini ndakaita chete chikamu chidiki chegoho. Izvi zvakaburitsa waini yemhando yepamusoro. Miti yemiorivhi inozivawo kutonhora uye kupisa uye haina kubereka michero yemhando futi.
Muchidimbu, yaive njodzi yakonzerwa nekuputika kukuru kwegomo. Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve gore pasina zhizha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Mamiriro ekunze » Gore risina zhizha